Frequency Analysis [Code:Breaker] – EFM – Luna M00n
Directory For Easy Access
EFM – Luna M00n
-I m not Security Researcher , Pentester , Hackers , etc.. Just Learn & Share
Written by lunam00n March 21, 2016 March 21, 2016
Frequency Analysis [Code:Breaker]
Cryptography & Breaking the cipher ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သိကိုသိထားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ကုန်ခံပြီးရေးပေးထားတာပါ။
Frequency Analysis အကြောင်းပြောပါမယ်။ ဘာကြောင့်ဆို Frequency Analysis ဟာ
Monoalphabetic Substution Cipher တွေ Polyalphabetic Substitution Cipher စတာတွေကို Break
လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်လို့ပါပဲ။ အချိန်အရင်လောက်မရတော့တာကြောင့် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပဲအဓိက
Frequency Analysis လုပ်ရတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်မယ်။ Language တွေရဲ့ letter တစ်လုံးစီမှာ
မတူညီတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချက်တွေရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါဟာအဓိကဘာလဲဆို English စာလုံးတွေမှာဆို လူသုံးများတဲ့ words တွေမှာ Z ဆိုတဲ့ Character ဟာ
ဘယ်လောက်ထိပါဝင်မှုရှိလဲဆိုတာပါပဲ။ အနည်းဆုံး ပါဝင်တာကိုသိထားရမယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ် character ဟာ အများဆုံးပါဝင်သလဲဆိုရင်
E character ပါ။ E ဟာ 12% ပါဝင်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဘယ် Language ဟာ ဘယ်လိုဆိုတာကိုကျနော်တို့အကုန်လုံးသိထားစရာမလိုပါဘူး။
Language တေ်ာတေ်ာများများအတွက် ရှေ့ကလူတွေ research လုပ်ထားတဲ့ Database တွေရှိပါတယ် ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးတွေကတော့
English ရဲ့ Letter Frequecy ပါ။
ကျနော်တို့ဟာ ဒီ Information ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Cipher Code တွေကို Break လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ E ဆိုတဲ့ Character ကို X အဖြစ်နဲ့ Encrypt လုပ်ထားတယ်ဆိုပါတော့။ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။
E ဆိုတာ X ဆိုရင် E က Letter Frequency မှာ ပါဝင်မှုအများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် Cipher Text ထဲမှာ X တွေကများနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသဘောပဲ Cipher Text တစ်ခုမှာ P တွေအရမ်းများနေတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါဆိုရင် P ဟာ E လို့ကျနော်တို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်။
ဒီတော့ P ကိုတွေ့တိုင်း E တွေပြောင်းကြည့်ရမယ့်သဘောပေါ့။ အပေါ်ကပုံလေးတွေအရ t နဲ့aဟာလည်း ရာခိုင်နှုန်းများတာကြောင့် P ဟာ T သို့မဟုတ် A လည်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို အကုန်လိုက်စမ်းထည့်ကြည့်ရတော့မှာလား။ မဟုတ်သေးပါဘူး Code Breaker က ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ ဘာတွေသုံးသေးလဲဆိုရင်တော့
“personality traits” တွေကိုသုံးပါတယ်။ ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်တော့ letter အစုံတွေ၊ မြန်မာလိုလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးတွေပေါ့။
ဒီလောက်ဆို Frequency Analysis ရဲ့ Background ကိုနားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Example လေးတစ်ခုလောက်လုပ်မယ်ဆို
ပိုနားလည်သွားမှာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့တူတူလေ့လကြတာပေါ့။ ဟုတ်ပြီ။ ကျနော်ကတော့ Reference Site ကနေပဲ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Cipher Text လေးကို
အဲ့ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Frequency Analysis Tool ကိုအသုံးပြုဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်သုံးတဲ့ Online Tool လေးကတော့ http://www.richkni.co.uk/php/crypta/freq.php
ဒီထက်ပိုလွယ်တဲ့ Tools တွေလည်းရှိချင်ရှိမယ်။ ဘာကြောင့်ဒါကိုသုံးပြီးပြသလဲဆိုရင်တော့ မျက်စိထဲမြင်အောင်လို့ပါ။ကျနော်တို့ကလေ့လာနေကြတာမလား။
GFS WMY OG LGDVS MF SFNKYHOSU ESLLMRS, PC WS BFGW POL DMFRQMRS, PL OG CPFU M UPCCSKSFO HDMPFOSXO GC OIS LMES DMFRQMRS DGFR SFGQRI OG CPDD GFS LISSO GK LG, MFU OISF WS NGQFO OIS GNNQKKSFNSL GC SMNI DSOOSK. WS NMDD OIS EGLO CKSJQSFODY GNNQKKPFR DSOOSK OIS ‘CPKLO’, OIS FSXO EGLO GNNQKKPFR DSOOSK OIS ‘LSNGFU’ OIS CGDDGWPFR EGLO GNNQKKPFR DSOOSK OIS ‘OIPKU’, MFU LG GF, QFOPD WS MNNGQFO CGK MDD OIS UPCCSKSFO DSOOSKL PF OIS HDMPFOSXO LMEHDS. OISF WS DGGB MO OIS NPHISK OSXO WS WMFO OG LGDVS MFU WS MDLG NDMLLPCY POL LYEAGDL. WS CPFU OIS EGLO GNNQKKPFR LYEAGD MFU NIMFRS PO OG OIS CGKE GC OIS ‘CPKLO’ DSOOSK GC OIS HDMPFOSXO LMEHDS, OIS FSXO EGLO NGEEGF LYEAGD PL NIMFRSU OG OIS CGKE GC OIS ‘LSNGFU’ DSOOSK, MFU OIS CGDDGWPFR EGLO NGEEGF LYEAGD PL NIMFRSU OG OIS CGKE GC OIS ‘OIPKU’ DSOOSK, MFU LG GF, QFOPD WS MNNGQFO CGK MDD LYEAGDL GC OIS NKYHOGRKME WS WMFO OG LGDVS
ဒီ Cipher Text ကို ကျနော်တို့စမ်းသပ်မယ်ဗျာ။ ဒါဆိုပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲ။ frequency analysis လုပ်ရမှာပေါ့။
အထက်မှာပေးထားတဲ့ tool နဲ့စမ်းတဲ့အခါမှာ အောက်ကလိုပါဝင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းလေးတွေရပါတယ်။
o : 85
g : 67
f : 51
e : 23
r : 17
w : 16
ဒါဆိုရင် S ဟာအများဆုံးပေါ့။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ ဟာ letter frequency မှာ ပါဝင်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ E နဲ့ S ကို replace လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့။နောက်ထပ်အများဆုံးက O လို့ဆိုပါတယ်။ letter frequency မှာ T ကအများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ဒီ ၂ ခုကိုအရင်ဆုံး replace လုပ်ကြည့်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြန်ရမယ်။
gfE wmy Tg lgdvE mf EfnkyhTEu eEllmrE, pc wE bfgw pTl dmfrqmrE, pl Tg cpfu m upccEkEfT hdmpfTExT gc TiE lmeE dmfrqmrE dgfr Efgqri Tg cpdd gfE liEET gk lg, mfu TiEf wE ngqfT TiE gnnqkkEfnEl gc Emni dETTEk. wE nmdd TiE eglT ckEjqEfTdy gnnqkkpfr dETTEk TiE ‘cpklT’, TiE fExT eglT gnnqkkpfr dETTEk TiE ‘lEngfu’ TiE cgddgwpfr eglT gnnqkkpfr dETTEk TiE ‘Tipku’, mfu lg gf, qfTpd wE mnngqfT cgk mdd TiE upccEkEfT dETTEkl pf TiE hdmpfTExT lmehdE. TiEf wE dggb mT TiE nphiEk TExT wE wmfT Tg lgdvE mfu wE mdlg ndmllpcy pTl lyeagdl. wE cpfu TiE eglT gnnqkkpfr lyeagd mfu nimfrE pT Tg TiE cgke gc TiE ‘cpklT’ dETTEk gc TiE hdmpfTExT lmehdE, TiE fExT eglT ngeegf lyeagd pl nimfrEu Tg TiE cgke gc TiE ‘lEngfu’ dETTEk, mfu TiE cgddgwpfr eglT ngeegf lyeagd pl nimfrEu Tg TiE cgke gc TiE ‘Tipku’ dETTEk, mfu lg gf, qfTpd wE mnngqfT cgk mdd lyeagdl gc TiE nkyhTgrkme wE wmfT Tg lgdvE
ခုရလာတဲ့ဟာကိုထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် TiE တွေတော်တော်များတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ English စာမှာ the ဟာအတော်များများပါဝင်တာကို သတိထားမိတယ်ဆိုရင် i ဟာ h ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်ဆိုတာကျနော်တို့ရိပ်မိပြီ။ နောက်တစ်ခုက တတိယ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး g ဟာဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရမယ်။ G ဟာ Letter Frequency အရဆို A ဖြစ်နိုင်သလို O နဲ့ I လည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါမယ့်3လုံးမြောက်မှာပဲ Tg ဆိုတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့တာကြောင့် ta ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ti ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ to ကတော့ meaning ရှိတာကြောင့် ကျနော်တို့ g ဟာ O ပါလို့ယူဆလို့ရပြီထင်ပါတယ် ။ ဒီလိုဆို g နဲ့ i ကို အစားသွင်းကြည့်လိုက်တော့
OfE wmy TO lOdvE mf EfnkyhTEu eEllmrE, pc wE bfOw pTl dmfrqmrE, pl TO cpfu m upccEkEfT hdmpfTExT Oc THE lmeE dmfrqmrE dOfr EfOqrH TO cpdd OfE lHEET Ok lO, mfu THEf wE nOqfT THE OnnqkkEfnEl Oc EmnH dETTEk. wE nmdd THE eOlT ckEjqEfTdy Onnqkkpfr dETTEk THE ‘cpklT’, THE fExT eOlT Onnqkkpfr dETTEk THE ‘lEnOfu’ THE cOddOwpfr eOlT Onnqkkpfr dETTEk THE ‘THpku’, mfu lO Of, qfTpd wE mnnOqfT cOk mdd THE upccEkEfT dETTEkl pf THE hdmpfTExT lmehdE. THEf wE dOOb mT THE nphHEk TExT wE wmfT TO lOdvE mfu wE mdlO ndmllpcy pTl lyeaOdl. wE cpfu THE eOlT Onnqkkpfr lyeaOd mfu nHmfrE pT TO THE cOke Oc THE ‘cpklT’ dETTEk Oc THE hdmpfTExT lmehdE, THE fExT eOlT nOeeOf lyeaOd pl nHmfrEu TO THE cOke Oc THE ‘lEnOfu’ dETTEk, mfu THE cOddOwpfr eOlT nOeeOf lyeaOd pl nHmfrEu TO THE cOke Oc THE ‘THpku’ dETTEk, mfu lO Of, qfTpd wE mnnOqfT cOk mdd lyeaOdl Oc THE nkyhTOrkme wE wmfT TO lOdvE
OfE ဆိုတဲ့ထိပ်ဆုံးစာလုံးမှာfဟာဘာဖြစ်နိုင်မလဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Letter Frequency အရ O ကပါပြီးသားဆိုတော့ သူ့အောက်က N ဟာ F တန်ဖိုးပေါ့။ ဒီတော့ n ဟာfဖြစ်သွားပြီ။ lHEET ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆို sheet ကဖြစ်နိုင်ခြေများတာကြောင့် L နေရာမှ S တွေအစားထိုးကြည့်မယ်။
ONE wmy TO SOdvE mN ENnkyhTEu eESSmrE, pc wE bNOw pTS dmNrqmrE, pS TO cpNu m upccEkENT hdmpNTExT Oc THE SmeE dmNrqmrE dONr ENOqrH TO cpdd ONE SHEET Ok SO, mNu THEN wE nOqNT THE OnnqkkENnES Oc EmnH dETTEk. wE nmdd THE eOST ckEjqENTdy OnnqkkpNr dETTEk THE ‘cpkST’, THE NExT eOST OnnqkkpNr dETTEk THE ‘SEnONu’ THE cOddOwpNr eOST OnnqkkpNr dETTEk THE ‘THpku’, mNu SO ON, qNTpd wE mnnOqNT cOk mdd THE upccEkENT dETTEkS pN THE hdmpNTExT SmehdE. THEN wE dOOb mT THE nphHEk TExT wE wmNT TO SOdvE mNu wE mdSO ndmSSpcy pTS SyeaOdS. wE cpNu THE eOST OnnqkkpNr SyeaOd mNu nHmNrE pT TO THE cOke Oc THE ‘cpkST’ dETTEk Oc THE hdmpNTExT SmehdE, THE NExT eOST nOeeON SyeaOd pS nHmNrEu TO THE cOke Oc THE ‘SEnONu’ dETTEk, mNu THE cOddOwpNr eOST nOeeON SyeaOd pS nHmNrEu TO THE cOke Oc THE ‘THpku’ dETTEk, mNu SO ON, qNTpd wE mnnOqNT cOk mdd SyeaOdS Oc THE nkyhTOrkme wE wmNT TO SOdvE
SOdvE ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေအရ solve ဖြစ်နိုင်ချေများတာကြောင့်dနေရမှာ L ကိုထည့်ကြည့်မယ်။ ဟုတ်ပြီ နောက်တော့ SHEET Ok SO ဆိုတဲ့စာကို နှစ်ကြောင်းမြောက်ရဲ့ဆုံးခါနီးမှာတွေ့ရတယ်။ Ok ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ sheet or so ပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့် K နေရာကို R နဲ့အစားသွင်းမယ်။
ONE wmy TO SOLvE mN ENnRyhTEu eESSmrE, pc wE bNOw pTS LmNrqmrE, pS TO cpNu m upccERENT hLmpNTExT Oc THE SmeE LmNrqmrE LONr ENOqrH TO cpLL ONE SHEET OR SO, mNu THEN wE nOqNT THE OnnqRRENnES Oc EmnH LETTER. wE nmLL THE eOST cREjqENTLy OnnqRRpNr LETTER THE ‘cpRST’, THE NExT eOST OnnqRRpNr LETTER THE ‘SEnONu’ THE cOLLOwpNr eOST OnnqRRpNr LETTER THE ‘THpRu’, mNu SO ON, qNTpL wE mnnOqNT cOR mLL THE upccERENT LETTERS pN THE hLmpNTExT SmehLE. THEN wE LOOb mT THE nphHER TExT wE wmNT TO SOLvE mNu wE mLSO nLmSSpcy pTS SyeaOLS. wE cpNu THE eOST OnnqRRpNr SyeaOL mNu nHmNrE pT TO THE cORe Oc THE ‘cpRST’ LETTER Oc THE hLmpNTExT SmehLE, THE NExT eOST nOeeON SyeaOL pS nHmNrEu TO THE cORe Oc THE ‘SEnONu’ LETTER, mNu THE cOLLOwpNr eOST nOeeON SyeaOL pS nHmNrEu TO THE cORe Oc THE ‘THpRu’ LETTER, mNu SO ON, qNTpL wE mnnOqNT cOR mLL SyeaOLS Oc THE nRyhTOrRme wE wmNT TO SOLvE
ခုဆိုရင်တော်တေ်ာလေးပုံပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယလိုင်းမှာပဲ ENOqrH ကိုတွေ့မှာပေါ့။ enough ဖြစ်ဖို့များတယ်လေ။ q = u , r =g ဆိုပြီးအစားသွင်းကြည့်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ wmy ဆိုတဲ့စာလုံးကလည်း way ကဖြစ်ဖို့များတယ်မလား။ m=a စမ်းကြည့်မယ်။
ONE wAy TO SOLvE AN ENnRyhTEu eESSAGE, pc wE bNOw pTS LANGUAGE, pS TO cpNu A upccERENT hLApNTExT Oc THE SAeE LANGUAGE LONG ENOUGH TO cpLL ONE SHEET OR SO, ANu THEN wE nOUNT THE OnnURRENnES Oc EAnH LETTER. wE nALL THE eOST cREjUENTLy OnnURRpNG LETTER THE ‘cpRST’, THE NExT eOST OnnURRpNG LETTER THE ‘SEnONu’ THE cOLLOwpNG eOST OnnURRpNG LETTER THE ‘THpRu’, ANu SO ON, UNTpL wE AnnOUNT cOR ALL THE upccERENT LETTERS pN THE hLApNTExT SAehLE. THEN wE LOOb AT THE nphHER TExT wE wANT TO SOLvE ANu wE ALSO nLASSpcy pTS SyeaOLS. wE cpNu THE eOST OnnURRpNG SyeaOL ANu nHANGE pT TO THE cORe Oc THE ‘cpRST’ LETTER Oc THE hLApNTExT SAehLE, THE NExT eOST nOeeON SyeaOL pS nHANGEu TO THE cORe Oc THE ‘SEnONu’ LETTER, ANu THE cOLLOwpNG eOST nOeeON SyeaOL pS nHANGEu TO THE cORe Oc THE ‘THpRu’ LETTER, ANu SO ON, UNTpL wE AnnOUNT cOR ALL SyeaOLS Oc THE nRyhTOGRAe wE wANT TO SOLvE
eESSAGE ဆိုတာ Message ဖြစ်နိုင်ချေများတယ် ဒီတော့ e=m , သုံးကြောင်းမြောက်မှာ nOUNT ဆိုတော့ count ဖြစ်နိုင်တယ် ။ n =c
ONE wAy TO SOLvE AN ENCRyhTEu MESSAGE, pc wE bNOw pTS LANGUAGE, pS TO cpNu A upccERENT hLApNTExT Oc THE SAME LANGUAGE LONG ENOUGH TO cpLL ONE SHEET OR SO, ANu THEN wE COUNT THE OCCURRENCES Oc EACH LETTER. wE CALL THE MOST cREjUENTLy OCCURRpNG LETTER THE ‘cpRST’, THE NExT MOST OCCURRpNG LETTER THE ‘SECONu’ THE cOLLOwpNG MOST OCCURRpNG LETTER THE ‘THpRu’, ANu SO ON, UNTpL wE ACCOUNT cOR ALL THE upccERENT LETTERS pN THE hLApNTExT SAMhLE. THEN wE LOOb AT THE CphHER TExT wE wANT TO SOLvE ANu wE ALSO CLASSpcy pTS SyMaOLS. wE cpNu THE MOST OCCURRpNG SyMaOL ANu CHANGE pT TO THE cORM Oc THE ‘cpRST’ LETTER Oc THE hLApNTExT SAMhLE, THE NExT MOST COMMON SyMaOL pS CHANGEu TO THE cORM Oc THE ‘SECONu’ LETTER, ANu THE cOLLOwpNG MOST COMMON SyMaOL pS CHANGEu TO THE cORM Oc THE ‘THpRu’ LETTER, ANu SO ON, UNTpL wE ACCOUNT cOR ALL SyMaOLS Oc THE CRyhTOGRAM wE wANT TO SOLvE
ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးပုံပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါပြီ။ CRyhTOGRAM ဒါလေးဆိုရင် Cryptogram ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် h=p , SyMaOLS ဆိုရင် symbols ဖြစ်နိုင်တယ် ဒီတော့ a=b ,CphHER ဆိုတာ Cipher > p=i
ONE wAy TO SOLvE AN ENCRyPTEu MESSAGE, Ic wE bNOw ITS LANGUAGE, IS TO cINu A uIccERENT PLAINTExT Oc THE SAME LANGUAGE LONG ENOUGH TO cILL ONE SHEET OR SO, ANu THEN wE COUNT THE OCCURRENCES Oc EACH LETTER. wE CALL THE MOST cREjUENTLy OCCURRING LETTER THE ‘cIRST’, THE NExT MOST OCCURRING LETTER THE ‘SECONu’ THE cOLLOwING MOST OCCURRING LETTER THE ‘THIRu’, ANu SO ON, UNTIL wE ACCOUNT cOR ALL THE uIccERENT LETTERS IN THE PLAINTExT SAMPLE. THEN wE LOOb AT THE CIPHER TExT wE wANT TO SOLvE ANu wE ALSO CLASSIcy ITS SyMBOLS. wE cINu THE MOST OCCURRING SyMBOL ANu CHANGE IT TO THE cORM Oc THE ‘cIRST’ LETTER Oc THE PLAINTExT SAMPLE, THE NExT MOST COMMON SyMBOL IS CHANGEu TO THE cORM Oc THE ‘SECONu’ LETTER, ANu THE cOLLOwING MOST COMMON SyMBOL IS CHANGEu TO THE cORM Oc THE ‘THIRu’ LETTER, ANu SO ON, UNTIL wE ACCOUNT cOR ALL SyMBOLS Oc THE CRyPTOGRAM wE wANT TO SOLvE
ENCRyPTEu ဆိုတော့ Encrypted> U=d ဖြစ်သွားမယ်။ Ic = if > c=f , bNOw = know > b=k ။ ဒီလိုဆိုသိပ်မကျန်တော့ဘူး ကိုယ့်ဖာသာဆက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့မယ်။ J =q , x=x ,y=y,z=z
Bravo ! ကျနော်တို့ Plain Text ကိုရပြီပေါ့။
ONE wAY TO SOLvE AN ENCRYPTED MESSAGE, IF wE KNOw ITS LANGUAGE, IS TO FIND A DIFFERENT PLAINTEXT OF THE SAME LANGUAGE LONG ENOUGH TO FILL ONE SHEET OR SO, AND THEN wE COUNT THE OCCURRENCES OF EACH LETTER. wE CALL THE MOST FREQUENTLY OCCURRING LETTER THE ‘FIRST’, THE NEXT MOST OCCURRING LETTER THE ‘SECOND’ THE FOLLOwING MOST OCCURRING LETTER THE ‘THIRD’, AND SO ON, UNTIL wE ACCOUNT FOR ALL THE DIFFERENT LETTERS IN THE PLAINTEXT SAMPLE. THEN wE LOOK AT THE CIPHER TEXT wE wANT TO SOLvE AND wE ALSO CLASSIFY ITS SYMBOLS. wE FIND THE MOST OCCURRING SYMBOL AND CHANGE IT TO THE FORM OF THE ‘FIRST’ LETTER OF THE PLAINTEXT SAMPLE, THE NEXT MOST COMMON SYMBOL IS CHANGED TO THE FORM OF THE ‘SECOND’ LETTER, AND THE FOLLOwING MOST COMMON SYMBOL IS CHANGED TO THE FORM OF THE ‘THIRD’ LETTER, AND SO ON, UNTIL wE ACCOUNT FOR ALL SYMBOLS OF THE CRYPTOGRAM wE wANT TO SOLvE
Refrence : Google , Wikipedia , Crypto-inteactive-maths, and others
New Domain announced
XSS with SVG Image
Android Info Grabbing using XSS
Shibuya xD Thats why i crazy Masato
Jquery DOM XSS logic
./4kl-ln on The Art of Null Character
thinbashane on XSS @ MySQL Error
Asadi on XSS @ MySQL Error
thinbashane on The Art Of Crypto [Day 1]
Previous Post Dancing with Caesar Cipher [Python]
Next Post UI Redressing Technique [Cursor Jacking]